လည်စည်း၊ ရှပ်အင်္ကျီနှင့်ဝတ်စုံကိုပေါင်းစပ်ရန်စည်းမျဉ်း ၅ ခု | စတိုင်လ်အမျိုးသားများ
Paco မာရီယာ Garcia က | | လူနေမှုပုံစံစတဲ့, သဘောထားတွေ
ဘယ်လောက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုသင်မမြင်နိုင်ဘူး ရှပ်အင်္ကျီနှင့်အတူလည်စည်းဝတ်ဆင် သင်အခြေအနေကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုမထားမချင်း၎င်းသည်လည်စည်း၊ ရှပ်အင်္ကျီနှင့်ဝတ်စုံအကြားသဟဇာတဖြစ်သည့်ပေါင်းစပ်မှုတစ်ခုကိုရွေးချယ်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အများစုအတွက်ကြီးမားသောစိန်ခေါ်မှုကိုဆိုလိုသည်။ ပြီးတော့အဲဒါဟာမခက်ခဲဘူး၊ သင်အနည်းငယ်လိုက်လုပ်ဖို့လိုတယ် အခြေခံစည်းမျဉ်းများ 100% hit ရန်။
1 ၅ ကျွန်ုပ်တို့လိုက်နာရမည့်အခြေခံစည်းမျဉ်းများ
1.1 ပထမ ဦး စွာဝတ်စုံကိုရွေးချယ်ပါ
3.2 ပုံနှိပ်နှင့်လွင်ပြင်ပေါင်းစပ်: အဖြူရောင်ရှပ်အင်္ကျီ
ရှပ်အင်္ကျီနှင့်ဝတ်စုံနှင့်အတူလည်စည်းပေါင်းစပ်တဲ့အခါ လိုက်နာရမည့်အခြေခံစည်းမျဉ်းများစွာရှိသည် အောက်မှာအသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည် -
ပထမ ဦး စွာဝတ်စုံကိုရွေးချယ်ပါ
သငျသညျအိမျခေါင်မိုးနှင့်အတူစတင်ရန်မလိုအပ်ပါဘူး, ငါဆိုသည်ကားငါအကြိမ်ပေါင်းများစွာကျနော်တို့စတိုးဆိုင်ဖြတ်သန်းနှင့်လည်စည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အာရုံကိုဖမ်းမိသောကွောငျ့, ငါတို့သည်အဘယ်သို့ပြုကြသနည်း ငါတို့ ၀ ယ်တယ် ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းကိုမည်သို့ပေါင်းစပ်မည်ကိုမသိလျှင်၎င်းသည် ၀ ယ်ရန်သွေးဆောင်မှုထဲသို့မကျပါစေနှင့်။
ပထမ ဦး ဆုံးဝတ်စုံကိုရွေးချယ်ပါ၊ ၎င်းသည်မီးခိုးရောင်ဖြစ်သည်ဟုစိတ်ကူး။ အိပ်ရာထဲမှယူ။ အိပ်ရာပေါ်တင်လိုက်သည်။ ထို့နောက်ရှပ်အင်္ကျီကိုရွေးချယ်ပါ သင်၏အဝတ်တန်ဆာကိုချွတ်ပြီး၊ သင်ပေါင်းစပ်ခြင်းကိုမကြိုက်ပါကအခြားရှပ်အင်္ကျီတစ်မျိုးကို ရွေးချယ်၍ အခြားအရောင်တစ်မျိုးကိုစမ်းကြည့်ပါ။ ဥပမာသင်သည်ဤဝတ်စုံနှင့်အပြာရောင်ရှပ်အင်္ကျီကိုရွေးပါကသင့်တော်သောလည်စည်းသည်နက်ပြာရောင်သို့မဟုတ်ကြက်သွေးနီတွင်ရှိလိမ့်မည်။
အကယ်၍ သင်သည်ဥပမာအားဖြင့်၊ အပြာရောင်သို့မဟုတ်အနက်ရောင်ကဲ့သို့သောအရောင်တစ်မျိုးတည်းဖြင့်ဝတ်စုံကိုရွေးချယ်ပါကအဖြူသို့မဟုတ်အဖြူရောင်အစင်းရောင်ရှိသောရှပ်အင်္ကျီကိုရွေးချယ်ပြီးပေါင်းစပ်မှုကိုမူလထိတွေ့စေသည်။ ဤနည်းဖြင့်အရောင်တစ်မျိုးတည်းဖြင့်လည်စည်းဝတ်ဆင်ရန်မမေ့ပါနှင့်သို့မဟုတ် အကယ်၍ သင်သည် patterned လည်စည်းတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပါကဥပမာအားဖြင့်၎င်းသည်ရှပ်အင်္ကျီများထက်ပိုမိုသောအစင်းများဖြင့်ဖြစ်သည်။ အစဉ်အမြဲအကြီးအပုံနှိပ်နှင့်အတူသေးငယ်တဲ့ပုံနှိပ်ခြင်း၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နာပါ။
အရောင်ပေါင်းစပ်မှုကိုအလယ်မြေပြင်ရှာဖွေနေသည့်အထည်များ၏သဟဇာတဖြစ်မှုကိုရှာဖွေရာတွင်တွေ့ရသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်ခြားနားချက်များ မျှမျှတတဖြစ်ကြောင်းသဟဇာတနှင့်အရောင်များကိုဖန်တီးပါ ဆန့်ကျင်ဘက်။ သင့်မှာတစ်ခုရှိရင် အရေပြားအလင်း, အပြာနှင့်အပြာရင့်ရောင်ရှိသောရှပ်အင်္ကျီများသည်သင့်အတွက်ပိုသင့်တော်လိမ့်မည် rosier အသားအရေ, အစိမ်းရောင်သင်ပိုမိုကိုက်ညီပါလိမ့်မယ်။ ရှိသည်သောသူအပေါင်းတို့သည် မှောင်အသားအရေအရောင်မျိုးစုံရွေးချယ်နိုင်သည်။
ပဉ်စမအနေနှင့်သင်သုံးစွဲသောအရာများကိုထိန်းချုပ်ပါ။ မင်းမှာဘတ်ဂျက်အများကြီးမရှိဘူးဆိုရင်၊ သော့ချက်အရောင်များကိုဝယ်နှင့်ထုတ်ထုတ်ထားခဲ့ပါ နက်ရှိုင်းသော၊ မီးခိုးရောင်သို့မဟုတ်အပြာရောင်စသည့်အခြေခံအရောင်များဖြင့်တောက်ပသောအရောင်များသည်သင့်အားယနေ့ခေတ်တွင်အထောက်အကူပြုလိမ့်မည်။ သူတို့သည်ကောင်းမွန်သောဗီရိုနောက်ခံဖြစ်ပြီးကွဲပြားခြားနားသောရှပ်အင်္ကျီများနှင့်လည်စည်းများနှင့်ပေါင်းစပ်ရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။
con ပုံစံရှပ်အင်္ကျီ, အစိုင်အခဲအရောင်ဆက်ဆံမှု.
con ရိုးရိုးရှပ်အင်္ကျီ, Single- အရောင်သို့မဟုတ် patterned ဆက်ဆံရေး.
una အနက်ရောင်လည်စည်း ဒါဟာအနက်ရောင်ဝတ်စုံနှင့်အဖြူရောင်ရှပ်အင်္ကျီနှင့်အတူစံပြဖြစ်ပါသည်, ဟုတ်ကဲ့, အနက်ရောင်ရှပ်အင်္ကျီနှင့်အတူမပေါင်းပါနဲ့။
una အဖြူ၊ ဆင်စွယ်သို့မဟုတ်အဖြူရောင်လည်စည်းအကယ်၍ သင်ကအဖြူရောင်ရှပ်အင်္ကျီကိုဝတ်လျှင်၎င်းသည်အနည်းငယ်သာပေါ်လွင်လိမ့်မည်။
una ပန်းရောင်လည်စည်း ၎င်းသည်အဖြူရောင်သို့မဟုတ်အပြာရင့်ရောင်ရှပ်အင်္ကျီနှင့်မီးခိုးရောင်ဝတ်စုံနှင့်ပြည့်စုံသည်။
una အနီရောင်လည်စည်း အဖြူ၊ အပြာနှင့်အပြာရောင်ရှပ်အင်္ကျီနှင့်ပေါင်းစပ်သည်။
una လိမ္မော်ရောင်လည်စည်း လိမ္မော်ရောင်၊ အဖြူရောင်သို့မဟုတ်အပြာရောင်ရှပ်အင်္ကျီနှင့်အတူကြည့်ကောင်းသည်
una အပြာရောင်လည်စည်း ၎င်းသည်တူညီသောသို့မဟုတ်ပိုမိုပေါ့ပါးသောအသံနှင့်အတူအပြာရှပ်အင်္ကျီနှင့်လည်းအဖြူရောင်ရှပ်အင်္ကျီနှင့်ကိုက်ညီသည်။
una အစိမ်းရောင်လည်စည်း ၎င်းသည်အဖြူ၊ အမည်းရောင်သို့မဟုတ်အစိမ်းရောင်ရှပ်အင်္ကျီများနှင့်ပိုမိုပေါ့ပါးသည့်တောက်ပသောအဖြူရောင်များဖြင့်ထင်ရှားပေါ်လွင်လိမ့်မည်။
အမြဲတမ်းတော့မလွယ်ကူလှပါ ရှပ်အင်္ကျီ, ဝတ်စုံနှင့်လည်စည်းပေါင်းစပ်ရွေးချယ်ပါ, တစ်သဟဇာတ finish ကိုအတွက်ရရှိလာတဲ့။
တစ် ဦး ဝတ်စုံကိုဝတ်ဆင်ဘို့ 8 စတိုင်လမ်းညွှန်ချက်များ
ပထမတစ်ခုကမီးခိုးရောင်ဝတ်စုံကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၎င်းသည် flannel နှင့်ဆင်တူသောပစ္စည်းတစ်ခုဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့်မှောင်မိုက်သောတောက်ပသောမီးခိုးရောင်ဝတ်စုံတစ်မျိုးဖြစ်နိုင်သည်။ အိပ်ယာပေါ်မှာလဲပြီးရင်ရှပ်အင်္ကျီကိုရွေးမယ် ကျနော်တို့ကြိုက်နှစ်သက်ရာတစ်ခုရှာတွေ့သည်အထိကျနော်တို့ကရှပ်အင်္ကျီကိုပေါင်းစပ်ပြီးဝတ်စုံကိုအပေါ်စီးမှာထားမယ်။ ဥပမာကောင်းတစ်ခုမှာအပြာရောင်ရှပ်အင်္ကျီဖြစ်နိုင်သည်။
အချိန်ရောက်လာပြီ လည်စည်း၊ မီးခိုးရောင်ဝတ်စုံနှင့်အပြာရောင်ရှပ်အင်္ကျီအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုကဘာလဲ။ ကွဲပြားခြားနားသောလည်စည်းအခြားနည်းလမ်းများရှိပါသည်: ပန်းရောင်နှင့်လိမ္မော်ရောင်သွက်လက်။ ပျော်ရွှင်စေပြီးကောင်းစွာကိုက်ညီမှုရှိသည်။ ဝိုင်အနီရောင်သို့မဟုတ်ရေတပ်အပြာသည်လည်းကောင်းမွန်သောရွေးချယ်မှုဖြစ်နိုင်သည်။
တစ် ဦး ကစစ်ဆေးပြီးသို့မဟုတ်အစင်းဝတ်စုံလွင်ပြင်အဖြူရောင်ရှပ်အင်္ကျီနှင့်အတူကောင်းစွာသွားပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့ကြီးမားသောရင်ပြင်၌မီးခိုးရောင်ဝတ်စုံကိုရွေးသောဥပမာကိုယူကြကုန်အံ့။ ဒီဝတ်စုံအတွက်အရောင်တစ်မျိုးတည်းရှိတဲ့ရှပ်အင်္ကျီဟာအကောင်းဆုံးရွေးစရာဖြစ်လိမ့်မယ်၊ ဥပမာအားဖြင့်, အဖြူရောင်ရှပ်အင်္ကျီ။
လည်စည်းနှင့် ပတ်သက်၍ ၎င်းသည်ရှပ်အင်္ကျီနှင့်အတူတူဖြစ်သည်။ အဆိုပါဝတ်စုံကို plaid ဖြစ်သကဲ့သို့, လည်စည်းတစ်ခုတည်းအရောင်အမျိုးအစားဖြစ်သင့်သည်; ဥပမာအားဖြင့်အနီရောင်၏လှပသောအရိပ်။
မီးခိုးရောင်ဝတ်စုံအတွက်နောက်ထပ်အလွန်ပြေပြစ်သောရွေးချယ်စရာတစ်ခုမှာအနက်ရောင်ရှပ်အင်္ကျီဖြစ်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည် ပို၍ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရွေးချယ်စရာဖြစ်လိမ့်မည်။ တရားဝင်အခြေအနေများနှင့်စီးပွားရေးအစည်းအဝေးများအတွက်.
ဒါဟာအများဆုံးရဲပေါင်းစပ်ဖြစ်ပါတယ်။ အနီရောင်အရိပ်များစွာရှိပြီးတက်ကြွ။ အလွန်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောမှသည်မှောင်မိုက်ပြီးမီးရှို့ခံရသောအနီရောင်အထိရှိသည်။ ဒါ့အပြင် ဒါဟာရှပ်အင်္ကျီ၏ကွဲပြားခြားနားသောပစ္စည်းများနှင့်အတူပေါင်းစပ်ဖို့ကောင်းတဲ့ option တစ်ခုဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စတိုင်လ်အမျိုးသားများ » ပုံ » သဘောထားတွေ » လည်စည်း၊ ရှပ်အင်္ကျီနှင့်ဝတ်စုံကိုပေါင်းစပ်ရန်စည်းမျဉ်း ၅ ခု
အခမ်းအနားပြင်ပ (သေခြင်း) အပြင်ဘက်တွင်အနက်ရောင်ဝတ်စုံနှင့်အနက်ရောင်လည်စည်းကိုဝတ်ဆင်ရန်အကြံပြုလိုသောဆောင်းပါးသည်တင်းကြပ်မှုနှင့်လေးနက်မှုကင်းမဲ့သည်။
ဟိုင်း AAJJ၊ ဒီလိုမျိုးဖြစ်ဖို့မလိုဘူး၊ အစွန်းရောက်ဝါဒကဘယ်တော့မှမကောင်းဘူး။ အဖြူရောင်ရှပ်အင်္ကျီနှင့်သို့မဟုတ်အခြားအရောင်တောက်တောက်နှင့်ချည်မျှင်အင်္ကျီဖြင့်ကောင်းသောအနက်ရောင်ဝတ်စုံသည်အထူးအခါသမယအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ သင်လာမည့်ဆောင်း ဦး ရာသီ - ဆောင်းရာသီ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ အတွက်ခေတ်ရေစီးကြောင်းကိုတွေ့မြင်ရမည်ဖြစ်ပြီးသင်မြင်တွေ့ရသည်မှာ so
Dylan sanchez ဟုသူကပြောသည်
ငါ့မှာညအချိန်တွင်အနက်ရောင်ဝတ်စုံသာရှိသည်။ တရားဝင်တင်ဆက်ရန်လိုအပ်သည့်တက္ကသိုလ်အတွက်ကျွန်ုပ်တွင်အရောင်းပြခန်းတစ်ခုရှိသည်။ အကျီမဝတ်ဘဲအဖြူရောင်ရှပ်အင်္ကျီကို ၀ တ်ဆင်ခြင်းသည်အဆင်ပြေမည်လောသို့မဟုတ်လိုအပ်ပါသလား။ ခင်ဗျားဘာလည်ပတ်ဖို့အကြံပေးလဲ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ps: ကျွန်ုပ်သည်အနက်ရောင်ဝတ်စုံ၊ ရှပ်အင်္ကျီအဖြူနှင့်အနက်ရောင်လည်စည်းနှင့်ကိုက်ညီသည်။ ပို၍ ကြော့ရှင်း။ မရနိုင်သော (တူညီသောရွှေကမ္ဘာလုံးသို့မဟုတ်အော်စကာဆုများ)
Clever Narcotik အားပြန်ပြောပါ
မင်္ဂလာပါ အမှန်မှာတူညီသောစည်းမျဉ်းသည်လေးနှင့်ဆက်ဆံမှုနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ မှတ်ချက်ပေးသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ :)))
ငါ့မှာအရမ်းမှောင်မိုက်တဲ့အသားအရေရှိတယ်။ ရှပ်အင်္ကျီတွေထဲမှာဘယ်အရောင်တွေကို ၀ တ်ဆင်သင့်တယ်လို့ငါအကြံပေးသလဲ။ အဖြူရောင်ရှပ်အင်္ကျီကို ၀ တ်ဖို့အမြဲတမ်းမလိုချင်ဘူး။ သို့မဟုတ်မီးခိုးရောင်ဝတ်စုံကဲ့သို့အလုံခြုံဆုံးအရာကိုရွေးချယ်သင့်သည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
မင်္ဂလာပါ Javier! ရှပ်အင်္ကျီများသည်အမြဲတမ်းသင့်ကိုအမြဲတမ်းသင့်တော်ပါလိမ့်မည်။ ၄ င်းတို့သည်အဖြူရောင်ဖြစ်စရာမလိုပါ၊ အဝါရောင်၊ အပြာ၊ ပန်းရောင်စသဖြင့်အရိပ်များစွာမှသင်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ ဝတ်စုံများနှင့်မူကား၊ သင်အရောင်နှင့်ဝိုင်းဝိုင်းနိုင်သော်လည်းမီးခိုးရောင်သည်အမြဲတမ်းသင့်အတွက်ပိုကောင်းသည်။ reading စာဖတ်ခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ! သင်စောင့်နေတဲ့ပစ္စည်း ဒါဟာတကယ်ကိုအသုံးဝင်လိမ့်မည်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် !!!! 🙂
သူငယ်ချင်းများခင်ဗျာ၊ ရက်အနည်းငယ်အတွင်းမင်္ဂလာဆောင်တစ်ခုကျွန်တော်မီးခိုးရောင်ဝတ်စုံကိုဝယ်ပြီး vza ကို၎င်းကိုခရမ်းရောင်လည်စည်းနှင့်ပေါင်းစပ်ချင်သော်လည်းမည်သည့်ရှပ်အင်္ကျီနှင့်ကျွန်တော်မသိပါ။
Luciano Orellana Caldera ဟုသူကပြောသည်
အနုပညာရှင်အချို့သည်အနက်ရောင်ရှပ်အင်္ကျီနှင့်အနက်ရောင်လည်စည်းကိုဝတ်ဆင်ကြသည်။ သူတို့ကိုငါအဖြူရောင်လည်စည်းနှင့်အနက်ရောင်ဝတ်စုံနှင့်အတူခိုင်ခံ့သောအပြာသောရှပ်အင်္ကျီကိုမြင်ကြပြီ။ အဆင်ပြေလား ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Luciano Orellana Caldera အားစာပြန်ပါ
Leonardo Velazquez ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ အဘယ်သို့နည်း။ မီးခိုးရောင်ဝတ်စုံကိုအနက်ရောင်ရှပ်အင်္ကျီနှင့်ပေါင်းစပ်ရန်လိုအပ်သည်။ လည်စည်းနှင့်မည်သည့်အရောင်နှင့်ကိုက်ညီသည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။ ကျောင်းဆင်းပွဲအတွက်သင်ကူညီနိုင်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
Leonardo Velazquez အားပြန်ပြောပါ
Pau သင်းအုပ်ဆရာLópez ဟုသူကပြောသည်
Pau Pastor Lópezအားပြန်ပြောပါ
အနက်ရောင်ဝတ်စုံနှင့်အတူအဘယ်လည်စည်းနှင့်ရှပ်အင်္ကျီ (အနက်ရောင်လည်စည်းနှင့်ဒဏ္myာရီအဖြူရောင်ရှပ်အင်္ကျီထက်အခြား) ပေါင်းစပ်နိုင်သလဲ
အနက်ရောင်ဝတ်စုံဖြင့်ပန်းရောင်လည်စည်းကိုဝတ်ဆင်နိုင်သည်။ ပြည့်စုံကောင်းမွန်သည်။ 🙂
jhonatan Castillo ဟုသူကပြောသည်
အလွန်ကောင်းသောဆောင်းပါးကျေးဇူးတင်ပါသည် !!! 😀
jhonatan castillo သို့ပြန်သွားပါ
Sergio Ramirez ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ အပြာရင့်ရောင်ဝတ်စုံနှင့်အဖြူရောင်အမွေးများရှိခရမ်းရောင်ရှပ်အင်္ကျီသည်မကောင်းသောအယူအဆဟုတ်မဟုတ်၊ ကျွန်ုပ်သည်မည်သည့်လည်စည်းနှင့်ပေါင်းစပ်နိုင်သည့် (ပုံမပေါ်ပါ) အယူအဆကောင်းလျှင်သိလိုပါသလား။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
မင်္ဂလာပါ ၎င်းသည်အလွန်ကောင်းသောစိတ်ကူးမဟုတ်ပါ၊ အကောင်းဆုံးစံနမူနာမှာပန်းရောင်သို့မဟုတ်ဆင်စွယ်ဖြူရှိလည်စည်းနှင့်ပေါင်းစပ်ရန်ဖြစ်သည်
Manu varela ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၌အနက်ရောင်ဝတ်စုံရှိပြီးကျွန်ုပ်၏အသားအရေမှာအညိုရောင်ဖြစ်ပါသည်။ ခရမ်းရောင်အစင်းကြောင်းနှင့်အစိမ်းရင့်ရောင်အစိမ်းရောင်လိုင်းများကိုဝတ်ဆင်လိုပါသည်။ ကျွန်ုပ်မျက်မှန်အရောင် (အစိမ်းမှောင်မိုက်) နှင့်လိုက်ဖက်သည့်အတွက်ဤသည်ကိုကျွန်ုပ်ကြိုက်သည်။
Manu Varela အားပြန်ကြားပါ
အဘယ်သို့သောရှပ်အင်္ကျီနှင့်အတူငါအနက်ရောင်ဘောင်းဘီနှင့် beish အကျီပေါင်းစပ်ကြဘူး
အနက်ရောင်သို့မဟုတ်အဖြူရောင်ရှပ်အင်္ကျီနှင့်ဖိနပ်များသည်ဂျာကင်အင်္ကျီ၏အနိမ့်အမြင့်သာဖြစ်သင့်သည်၊ သို့မဟုတ်ပါကသင်ဂျာကင်အင်္ကျီသို့မရောက်မှီသင်ပထမ ဦး ဆုံးဝတ်ဆင်သည့်အချိန်အထိသင်ကောင်းကောင်းဝတ်ဆင်ထားပုံရသည်။ ကံနှင့်)
Cesar Velázques ဟုသူကပြောသည်
ငါအနက်ရောင်သို့မဟုတ်အဖြူရောင်ရှပ်အင်္ကျီကိုစဉ်းစားနိုင်ပြီး၊ ဖိနပ်သည်ဂျာကင်အင်္ကျီ၏အရောင်သို့မဟုတ်ပိုနည်းရမည်။ လွှ။ ကံကောင်းတယ်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်တွင်ဝတ်စုံဖြူတစ်လုံးလုံးရှိသည်။ ညသည်၎င်းကိုမည်သည့်ရှပ်အင်္ကျီနှင့်လည်စည်းဖြင့်ပေါင်းစပ်ရမည်ကိုမသိပါ
ငါဘ ၀ တစ်လျှောက်လုံးမှာအနက်ရောင်၊ မီးခိုးရောင်ဒါမှမဟုတ်ကောင်းကင်ပြာရောင်ရှပ်အင်္ကျီနဲ့ပေါင်းစပ်ဖို့အဖြူရောင်ဝတ်စုံကိုလိုချင်ခဲ့တယ်။
ဟုတ်ကဲ့၊ ဘယ်ဖိနပ်ကအကောင်းဆုံးဖြစ်မလဲ ???
အိုမာ MG ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ပေါင်းစပ်ဖို့အကြံပေးနိုင်မလား၊ ကျွန်ုပ်မှာရေတပ်ဝတ်စုံရှိပြီးဝတ်စုံဖြူနဲ့ဝတ်ချင်တယ်၊ ဘယ်လည်စည်းအရောင်ကသင့်လျော်သလဲ။ ငါဟာအညိုရောင် tees တွေပါ၊ ဒါမှမဟုတ်အခြားရှပ်အင်္ကျီတစ်စုံကဒီဝတ်စုံကိုကြည့်ကောင်းနေလိမ့်မယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Omar MG သို့စာပြန်ပါ
Jose Garcia ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်တစ်လအတွင်းမင်္ဂလာဆောင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်ပြီးအမှန်တရားမှာကျွန်ုပ်သည်လည်စည်းဝတ်ဆင်ခြင်းကိုအလွန်နှစ်သက်သည်မဟုတ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်ကြိုက်နှစ်သက်သော်လည်း၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အကြိုက်ဆုံးမဟုတ်ပါ။ အတိုချုပ်အနေဖြင့်မီးခိုးရောင်လည်စည်းဖြင့်တော်ဝင်အပြာရောင်လည်စည်းကိုဝတ်ဆင်ရန်စီစဉ်ထားသည်။ အရောင်ဝတ်စုံကပိုကောင်းမလား
သူသည်မီးခိုးရောင်ဝတ်စုံကို - အဖြူရောင်ရှပ်အင်္ကျီနှင့်အနက်ရောင်လည်စည်း၊ အဖြူရောင်ရှပ်အင်္ကျီနှင့်ခရမ်းရောင်လည်စည်းတို့ဝတ်ထားလျှင်ဘာဖြစ်မည်နည်း။ သို့မဟုတ်အဘယ်ရွေးချယ်စရာပိုကောင်းအသံ?
သူတို့ကကျွန်မသမီးရဲ့ဆယ်ငါးနှစ်မြောက်အောင်လုပ်တော့မယ်။ သူမ ၀ တ်ထားတဲ့အ ၀ တ်အစားကို ၀ တ်ဆင်ဖို့အနီရောင်ဖြစ်နေလိမ့်မယ်။ ငါဟာ beige ဝတ်စုံ၊ အနက်ရောင်ရှပ်အင်္ကျီနဲ့အနက်ရောင်နဲ့အနီရောင်လည်စည်းတွေကိုစဉ်းစားနေတယ်။ ။
Carlos Hernandez အားပြန်ပြောပါ
မင်္ဂလာပါ၊ စနေနေ့မှာကိုယ့်အနက်ရောင်ဝတ်စုံကို ၀ တ်ပြီး ၀ တ်ဆင်ထားတဲ့ရွှေရောင်လည်စည်းတစ်ခုကျင်းပတဲ့ပွဲတစ်ခုရှိတယ်။ အနက်ရောင်နဲ့ပန်းရောင်မဟုတ်တဲ့ဘယ်အရောင်ရှပ်အင်္ကျီကိုကျွန်တော်ဝတ်ဆင်နိုင်မလဲ။
ဟယ်လို။ စနေနေ့မှာပါတီပွဲလုပ်ပြီးအနက်ရောင်ဝတ်စုံ၊ ရွှေလည်စည်း ၀ ယ်လိုက်တယ်။ အနက်ရောင်၊ ပန်းရောင်မဟုတ်တဲ့ဘယ်ရှပ်အင်္ကျီကို ၀ တ်ဆင်လို့ရမလဲ။ ငါမိုက်မဲပြီ။
rene bejarano ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၌အစိမ်းရောင် chorsss နှင့်မိကျောင်းခလုတ်အချို့ရှိသည်။ ၎င်းကိုရော်ဘာဂျာကင်အင်္ကျီ၊ လည်စည်းသို့မဟုတ်ရှပ်အင်္ကျီဖြင့်အသုံးပြုလိုသည်။
rene bejarano အားပြန်ပြောပါ
ကောင်းပါပြီကောင်းပါပြီ၊ ကျွန်ုပ်၏ဥပဒေဘွဲ့စာတမ်းကိုတင်ပြတော့မည်။ အနက်ရောင်ဝတ်စုံကိုကြိုက်ပါသည်။ သင်က၎င်းကိုအဖြူရောင်မဟုတ်သည့်အခြားအရောင်များနှင့်ပေါင်းစပ်ရာတွင်ကူညီပေးပါကကျေးဇူးတင်ပါသည်၊ သင်၏အဖြေ။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်အသက် ၂၉ နှစ်ရှိပြီ၊ မီးခိုးရောင်ဝတ်စုံကိုဝယ်ယူခဲ့သည်။ ရှပ်အင်္ကျီနှင့်လည်စည်းဝယ်ရန်လမ်းညွှန်မှုလိုအပ်လိမ့်မည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
မင်၊ တစ်လခွဲလောက်ညစာစားပြီးဝိုင်အရောင်ပါ ၀ တ်ဆင်ချင်ပေမယ့်ဘယ်ဝတ်စုံကိုကျွန်တော်ပေါင်းသင့်သလဲ ((သို့) အနက်ရောင်ရှပ်အင်္ကျီအရောင်) ၀ တ်စုံနှင့်အနက်ရောင်ဝတ်စုံ ၀ တ်ချင်သည်။ , ဒါပေမယ့်အဖြူရောင်ရှပ်အင်္ကျီနဲ့ ၀ တ်ဆင်တာကကျွန်တော့်ကိုအံဝင်ဂွင်ကျဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတာကအရမ်းကိုရိုးရှင်းပါတယ်။ အခြားဘာရှပ်အင်္ကျီကိုငါ ၀ တ်ဆင်နိုင်မှာလဲ။
Jaime Vilchez ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်အနက်ရောင်ဝတ်စုံကိုမီးခိုးရောင်ရှပ်အင်္ကျီနှင့်ပေါင်းစပ်ရန်လိုအပ်သည်၊ မည်သည့်အရောင်ကပိုကောင်းလိမ့်မည်နည်း။
jaime vilchez အားပြန်ပြောပါ
Alexander Barrier ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၌အနက်ရောင်ဝတ်စုံနှင့်အပြာရောင်ရှပ်အင်္ကျီနှင့်ပန်းရောင်လည်စည်းတို့ပါရှိသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Alejandro Barrera အားပြန်ကြားပါ
မင်္ဂလာပါ ဒေါင်လိုက်အစင်းမီးနှင့်အနီရောင်အင်္ကျီနှင့်အတူအနက်ရောင်ဝတ်စုံကို။ ဘယ်အင်္ကျီ၊ လည်စည်းနဲ့လက်ကိုင်ပုဝါကိုကျွန်တော်ဝတ်သင့်သလဲ
ကောင်းပြီ၊ ကျွန်ုပ်မှာဘောင်းဘီအမည်းရောင်နဲ့မီးခိုးရောင်ဂျာကင်အင်္ကျီတစ်ထည်လိုချင်တယ်၊ ရှပ်အင်္ကျီနဲ့လည်စည်းကငါ့ကိုအံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေချင်တယ်
Alejandro Aldana Heredia ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါ၊ ရှပ်အင်္ကျီနှင့်လည်စည်းအနေဖြင့်အနီရင့်ဝတ်စုံကိုမည်သို့ပေါင်းစပ်ရမည်ကိုကျွန်ုပ်သိလိုပါသည်။ ကျွန်ုပ် ၀ တ်ထားသောဝတ်စုံနှင့်ပတ်သက်သောအကြံပြုချက်၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Alejandro Aldana Heredia အားပြန်ပြောပါ
ယောသပ်အန်တိုနီယိုလိုပက်ဇ် SANCHEZ ဟုသူကပြောသည်
အကြံပြုချက်ကောင်းများ။ ပုံစံနှင့် elegance ။
JOSE ANTONIO LOPEZ SANCHEZ ကိုပြန်ပြောပါ
SEA ... ဟုသူကပြောသည်
မင်းရဲ့စာမျက်နှာကိုငါတကယ်ကြိုက်တယ်၊ အရမ်းအရေးကြီးတဲ့အချက်အလက်တွေရှိတယ်ထင်တယ်၊ ဒါကြောင့်ဒီအဖြစ်အပျက်ကြီးတွေမှာမတိုက်မိဖို့ပါ။ ) ဒီအားလပ်ရက်ရာသီမှာအိမ်သူအိမ်သားတွေကိုဆက်သွယ်မှုနဲ့လက်ကိုင်ပုဝါတွေပေးဖို့ငါစီစဉ်ထားတယ်။ အနီ၊ အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်စသည်တို့ကိုထောင့်ဖြတ်မျဉ်းများနှင့်အတူအရောင်တစ်မျိုးတည်းဖြစ်လိမ့်မည်။ အပြည့်စုံသောအထုပ်ကိုပြုလုပ်ရန်သူတို့ကိုလုံးလုံးဖြူလက်ကိုင်ပဝါများပေးနိူင်သလား။ ကျွန်တော်အဖြေတွေကိုစောင့်နေပါတယ်
MAR သို့ပြန်သွားပါ ...
ငါ့သားသည်ဆရာဝန်ဘွဲ့ရခဲ့သည်။ အသားအရေမှောင်နေပြီ သူဘွဲ့ရမည့် ၀ တ်စုံနှင့်ဖိနပ်တို့ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။ ဒါဟာမနက်မှာကျောင်းဆင်းပွဲပါပဲ သငျသညျဂျာကင်အင်္ကျီသို့မဟုတ်ရုံ bleiser ရမယ်။ ကျေးဇူးပြုပြီးကျွန်တော့်ကိုကူညီပါ?
ငါ့သားကဆရာဝန်ဘွဲ့ရတယ်။ သူမသည်မှောင်မိုက်သောအသားအရောင်ရှိပြီးမနက်ခင်းတွင်ဖြစ်သည့်သူမ၏ကျောင်းဆင်းပွဲကိုမည်သို့ဝတ်ဆင်ရမည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။ ငါဂျာကင်အင်္ကျီဝတ်သင့်သလား ??? နှင့်ဖိနပ် ... ။ ? ကျေးဇူးပြု။ ကူညီပါ?
ယေရှု Gonzalez ဟုသူကပြောသည်
Jesus Gonzalez ကိုပြန်ပြောပါ